Dzosera Yakadzimwa Email muAptlook - DataNumen
musha Products DataNumen Outlook Repair Tora Kudzoreredza Email muAptlook
Tora Kudzoreredza Email muAptlook
Delete maemail nekukanganisa?
Kudurura rako Rakadzimwa Zvinhu folda nekukurumidza?
Lost maemail asingakwanise kuwanikwazve?
Zvikanganiso zvisina kujairika mufaira rePST?
Lost password yefaira rako rePST?
Outlook tsamba kudzoreredza matambudziko?
DataNumen Outlook Repair inogadzirisa nyore zvese izvi uye nezvimwe.
Kudzorera email inowanzo bviswa kubva kuOptlook kuri nyore. Kana bhatani rekubvisa radzvanywa, iyo email inonyatso kuiswa mune Yakabviswa Zvinhu folda Kuenda kufolder kunotendera iyo email kuti iverengerwe zvizere, uye inogona kuendeswa nyore nyore kune imwe dura.
Kana, zvakadaro, iyo Yakabviswa Zvinhu dhairekitori yadururwa, kana kana chinhu chacho chikabviswa neCtrl-Delete (izvo zvinonzi neMicrosoft zvakaoma kudzima), iyo email inobviswa kubva kuAptlook zvachose. Outlook email kudzoreredza inozove yakaoma zvakanyanya.
Zvinoenderana nerutsigiro rwaMicrosoft, “… kana usinga fambise zvinhu kuFaira Zvinhu Zvinhu usati waadzima, zvinhu izvi zvakabviswa, uye haugone kuzvidzorera kubva kuFafitera reZvinhu.”
Nzira chete yekubvisa email yakadaro ndeyekushandisa DataNumen Outlook Repair - kugadzira inokurumidza uye yakapusa basa rekugadzirisa dambudziko.
Inoshanda neAptlook 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 uye 2019.
Unodzoreredza zvakakwana mameseji e-mail, maforodhaosts, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, memos, majenali, zvinyorwa uye nezvimwe.
Unogona kusasarudzira ese email muAptlook - ingave yakajeka zvinyorwa, RTF kana HTML fomati.
Outlook tsamba zvakabatanidzwa zvakadzorerwa zvizere.
Zvinhu zvakaburitswa zvinotorwa zvizere.
Tsigiro yePST mafaera anopfuura 2 GB muhukuru uye kupatsanura mafaira ePST kana zvichidikanwa.
Tsigiro yekugadzira PST mafaera mune Outlook 97-2002 uye Outlook 2003-2010 fomati.
Kugadzira Batch kunotsigirwa.
Hapana ruzivo rwehunyanzvi runodiwa.